Canada Gabar Somali ah oo loo doortay Golaha latalinta Raisal Wasaaraha dalkasi.. | Mudug 24 Online
Canada Gabar Somali ah oo loo doortay Golaha latalinta Raisal Wasaaraha dalkasi..
Habboon Cali oo ah Somali-Canadian u ololeysa Dhaqdhaqaaqyadda Dhallinyaradda ee dalka Kanada ayaa loo magacaabay xubin ka tirsan Golaha La-talinta Dhallinyarada ee Ra’isul-wasaaraha dalkaasi, Justin Trudeau.
Habboon Cali oo haatan Arday ka ah Jamaacadda “The University of Toronto” oo la hadashay Shabakadda Wararka ee Muslim Link waxay faahfaahin ka bixisay xilka loo magacaabay iyo qaabka uu u sheego Golaha La-talinta Dhallinyarada ee Ra’isul-wasaaraha dalka Kanada.
Waxay sheegtay in dabayaaqadii bishii hore loo magacaabay xubinnimadda Golahaasi oo 20-qof ka kooban, kuwaasi oo dhinaca La-talinta ugu qaabilsan Ra’isul-wasaaraha dalkaasi.
Mar wax laga weydiiyey shaqsi ahaan hawsha loo xil-saaray waxay tilmaamtay in iyada mas’uul ka tahay bixinta Talooyinka Ra’isul-wasaaraha Kanada iyo Xukuumadiisa laga siinayso dhinacyadda Caafimaadka Dhimirka, Dib-u-heshiisiinta Shucuubta Asaliga, Kala duwanaanshaha, Hal-abuurka iyo Kobaca Dhaqaalaha.
Mar wax laga weydiiyey waxa ay ku soo kordhinayso Dhallinyarada ku nool Kanada, waxay Habboon Cali sheegtay inay u istaagi doonto sidii ay Dhallinyarada u heli laahaayeen Dhiirigelin iyoa inay Siyaasadda ka soo dhex muuqdaan.
“Waxaan rajeynayaa inaan wakiil u noqdo Dhallinyarada Mujtamacaygasida ugu wanaagsan ee ay awoodeyda tahay” ayey tiri Habboon Cali oo intaasi ku dartay inay tahay qof jeel Mustaqbalka Jiilka Cusub iyo inay u dodo arrimaha Caafimaadka, Helitaanka iyo Teknoolajiyadda.
Xigasho: Muslim Link